The Macrobians – Kaasho Maanka
Taariikhyahankii Giriigga ee loo yaqaanay Herodotus (484 – 425 B.C), kuna magac dheeraa, “Aabaha taariikhda” ayaa buugiisii loo yaqaanay ‘The Histories‘ (Taariikhaha) wuxuu inoogu soo wariyay dad uu ugu yeedhay “The Macrobians.”
Dadkaa, sida uu Herodotus inuu sheegay, waxa ay ku noolaayeen adduunka dacalkiisa koonfureed meesha uu ku dhamaado, sida ay Giriigu aaminsanaayeen oo ay aqoontoodu dhanayd, oo ku beegan koonfurta Ethiopian.
Herodotus buugiisa wuxuu ku xusay qiso dhex martay boqorkii Persia, oo markaa ka talinayay adduunka badankiisa, iyo boqorkii Macrobians-ka, markii uu ka persian-ku qabsaday Masar iyo wixii ku xeernaa oo dhan.
Wuxuu yidhi, boqorkii Persia ayaa danjirayaal iyo hadiyado u soo diray kii Macrobians-ka isagoo raba in boqortoyada Macrobians-ku ay isaga ku soo biirto oo ay hoos timaado. Boqorkii Macrobia ayaa midaa ka xanaaqay.
Kadibna, boqorka Macrobia ayaa intuu soo qabtay qaanso ka mid ah qaansooyinka Macrobians-ka u gaarka ahayd ee ay ku dagaal tegi jireen, oo ahayd qaanso wayn, xariga ka furay oo danjirayaashii u dhiibay.
Wuxuu boqorkii yidhi qaansadaan boqorkiina u geeya. Haddii uu xariga ku xidho, xaq buu u leeyahay in uu dhulkayga soo weeraro, haddii se uu kari waayo, ilaahyada haw mahad naqo maadaamaysan Macrobia isaga wali weerarin.
Siduu Herodotus sheegay, Macrobia waxay ahayd awood aad u sarraysa. Dadkeedu waxay ahaayeen dagaalyahanno dherer, xoog iyo qurux kulansaday oo cimri dheer. Siduu sheegay, ilaa iyo 120 sano bay qaarkood gaadhi jireen.
Waxay ku noolaayeen magaalooyin waaweyn, waxaana hogaamin jiray boqorro ay iyagu xooggooda, kartidooda iyo caqligooda ay ku doorteen. Waxay lahaayeen, suuqyo waaweyn, maxkamado iyo waliba xabsiyaal heersare ah.
QORMO LA XIRIIRTA: Ma boqorro beelahooda la joogaybaa mise rusul aadanaha loo dirray!
Macrobians-ka waxay ahayeen xoola dhaqato iyo badmaaxayaal. Waxay ku noolaayeen hilib iyo caano, waxayna ku caan ahaayeen dahab faro badan, ilaa la sheego in maxaabiista qaar ay katiinado dahab ah ku xidhi xidhi jireen.
Taariikhyahanadu waxa ay sheegaan in Macrobians-ka uu Herodotus sheegayo ay yihiin soomaalidii hore oo laga garan karo deegaan-juquraafiyeedka, muuqaal-jireedkiyo hab-nololeedkooda oo ka Soomalida shabaha.
Ummad marka ay dhalan rogmato oo ay hiddo-doorsoonto asalkeedana ilowdo ayuu burburkeeda iyo dabar go’eedu yimaadaa. Soojireen sooyaal leh beynu nahay laakiin waxa hooggan ina baday waa hurdo waynideenna.
W/Q: Saacid Kaahiye 11th December 2020